Yuu ula jeedaa madaxwayne Farmaajo siyaasiga xanaaqsan – Radio Daljir
Yuu ula jeedaa madaxwayne Farmaajo siyaasiga xanaaqsan
Seteembar 29, 2018 7:58 b 0
Madaxwayanaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa khudbad uu todobaadkii hore dhammaadkiisa ka jeediyay daah fur waxbarasho oo kadhacday Muqdisho waxaa uu weerar ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee xukuumaddiisa aad u dhaliila.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in soddonkii sano ee dalku burburka iyo soo kabashada uu ku jirayba ay caado noqoto waxa uu ugu yeeray siyaasiga xanaaqsan, kuwaasi oo uu sheegay inay mar walba oo horumar la sameeyo ay dowladda ay dhaliilayaan.
“Soddonkii sano waxaa batay siyaasiyiin xanaaqsan. Siyaasiyiinta xanaaqsan dhaqankii ayey halleeyeen, waxay xalaaleeyeen beentii, iyo in aan la shaqaysan. Wax badan oo diinta islaamka ay diidayso ayey xalaaleeyeen” ayuu yiri.
Hadalkaasi madax hadal hayn bulsho iyo waxa uu madaxwaynaha uu ula jeedo siyaasi xanaaqsan, dadka arrintan sida kulul uga hadlay waxaa ka mid ah Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya.
Qoraal uu soo bandhigay bartiisa internetka ayaa waxaa uu u dhigay ka dareen celinta siyaasiyiintooda oo isagu ka mid yahay xisbiga Daljir sidaan hoose.
Maamulka gobolka Hiiraan oo ka digay garsoorka loo aado Al-shabaab